Ndaichovha bhizautare ndakananga kuEastlea kwandaishanda ndiri bharanzi raimira paZebra Crossing kuti vana vemhene vepa Admiral Tait vagone kuyambuka nzira zvisina tsaona. Tose tinoziva kuti masaskamu ekumayard haagone kuyambuka ega nekuti havana skop dhonoro sevapfanha vekumarukisheni. Chokwadi ndechekuti kabasa kandanga ndapihwa ndiko kaifaniropihwa koporo vanenge vachatanga chingonjo, asi ini mudhara ane bvudzi jena, ane makore akutosvika makumi matatu ari pabasa ndakakandwa uku nekuti vakuru vakanga vaindibatirira. Asi iyo yatova imwe nyaya hayo. Ndichiri munzira chiovha-ovha chakarira, zvikanzi naSajeni, “Zuze, mhanya kubasa izvozvi. Kwaita nyanya kuno. Ovha.”
“Maswera here, baba Ano?” ndakanzwa izwi richidana mumba iri pedo.
“Taswera maswerawo,” ndakapindura ndichipfuurira zvangu.
Mumugwagwa mainge makazara vanhu vaifamba-famba, chero ari mahusiku, sezvinoitika mumarukisheni. Kuruboswe kwangu kwaiva nemajaha ainga akagara achitamba njuga vachiputa fodya. Pavakandiona vakandikwazisa. Vaiva vakomana vapedza chikoro, zvino kusina mabasa vaigoitei havo. Isu takakura nguva mabasa akawandisa, vanhu ndivo vaitoita vashoma.
Mukuneta kwangu, ndakatanga kugaya kuti dai zvaiita ndicharegera basa hangu. Ndaida kudzokera kumusha kwedu, kuManhenga, uko kwandanga ndakavaka kamba. Amai vangu nababa vakanga vachiri vapenyu. Munyika medu maifa vaduku, vakuru vachisara. Mumba yemuguta taisiya vana hedu. Ndaiva nemunda wangu wandaida kurima chibage, mhunga, nzungu, nyimo, mbambaira, nemuriwo. Zvimwewo maizongobuda ipwa, magaka, nembeva. Kumusha ndakange ndine miti yemichero, taiva nemitsubvu, mimango, migwavha, nemahabirosi, apo mumasango muzere mizhanje nemitohwe. Hapana asinanungo aifa nenzara kwedu! Hapana chinofadza moyo kunge kudya chikafu chawakarima nemaoko ako ukadiridza neziya rako wega. Maborn-rukisheni havazvinzwisise izvi, ukavati tora dura utswe vanokuti handei kuchigayo, kana kutoti tinotenga Roller Meal muchitoro. Ndiwo mafambiro enguva aya. Ndaive nedanga remombe, mbudzi, huku nemadhadha kumusha. Hapana chataishaiwa.
Pamadziro, mberi kwangu tanga tine mifananidzo yakawanda yemhuri. Panga pane wepamuchato wedu tichiri jaha nemhandara. Pazasi pacho taive nemufananidzo waMakomborero, mwanakomana wedu wekutanga. Aive asiri pano nesu nekuti anga atumirwa namauto kunorwa hondo yaKabila kuDRC. Zvaindishungurudza mumoyo paakatanga kutumirwa kuhondo, zvokuti ndaishaya hope. Ndainge ndisingade kuti apinde muchiuto. Dai akaita hake mudzidzisi kana mabharani, asi ainge ava pazera rekuzvionera, zviya zvinonzi pachiNdevere, “Indoda kufanele izibonele”. Nepamwe, mumoyo mangu ndaimuremekedza nekuti airwira nyika yake. Ini baba vake handina kurwa muhondo yerusununguko. Pamwe ndiwo mamiriro apasi kuti vana vairwa hondo dzisina kurwiwa namadzibaba awo. Ndakadya ndichitarisa mufananidzo wake, akapfeka hanzu dzake dzemavara-mavara echiuto, ngowani yebhareta iri mumusoro. Aive nemakore makumi maviri nerimwe asi ainga avakutoita kunge murume mukuru. Ndiwo mafambiro enguva.
“Zvakanaka. Kovamwe mese, makangoti zii so, maita basa renyu rekuchikoro here?”
Vakangoti tuzu, vachibwaira, ndikavadana nemazita:
“Sekai, Vheneziya, Chenhamo, hamusi kunzwa zvandabvunza here? Zvimwe muri kuda kuti nditore mvuu, ndiyo ingaite kuti mugone kutaura. Ndati maita homework yenyu here?”
“Aiwa vana, varegei vakadaro,” vadzimai vakada kuvadzivira.
“Kwete, ndaramba, hatitambe nechikoro tichidaro. Siyai sadza renyu, moenda kunotora mabhuku enyu. Pataikura isu, hapana aidya asina kuenda kumunda, mazuvano hapana anodya asina kuita basa rekuchikoro.”
“Hezvo, Baba Ano-”
“Zvandataura ndizvozvo,” ndakabva ndatoipedza nyaya yacho.
Pakazorira ngoma dzenhau, vanga vapedza mabhuku avo nekudya, ndakaudza vana kuti vaende kundorara. Joseph Madhimba naColin Harvey vakanga varipanyanga. Vakatanga nekutiudza kuti mutungamiriri wenyika anga ashanya kuAmerica, uko aienda kumusangano weMubatanidzwa weNyika Dzose kuNew York. Dzapera kwakauya nhau dzemhirizhonga yakaitika pakati peguta. Harvey akati povo yaipaza zvitoro ne mahofisi muguta saka mapurisa namauto akaita basa rakaisvonaka kudzosa rugare muguta guru reZimbabwe. Vakaratidza mahwindo anga akapazwa, vakaburitsa mukuru wemapurisa, ivo VaChihuri vachiyambira kuti vaya vanoda kukonzera mhirizhonga vazive kuti mapurisa anovabata. VaChimutengwende vakabudawo vachikurudzira vanhu kuti vadzokere kumabasa avo. VaDabengwa ndivowo vakati mauto enyika anga apihwa shoko rekuti vabatsire mapurisa uyezvo, “Havamire kupfura kana pane anoda kukonzera misindo.”
Vachikurukura nyaya, ndakafunga hangu matangiro andakaita basa muna1976 hondo yerusununguko ichipisa. Ndanga ndichiri mujaha ainzwa, ndikawanirwa basa muchipurisa nasekuru vangu, VaMarange, vaigara Haifiridzi, vaiva Sub-Inisipekita. Makore iwawo ndicho chinzvimbo chikurusa chaigona kusvikwa nemunhu mutema mumapurisa aSmith. Zvinzimbo zvevarungu zvaiva zvakasiyana nezvedu, asi chataiziva ndechokuti chero wakwirira sei uri mutema, chero chinzvimbo chako pabepa chiri pamusoro pemurungu arikutanga basa, iye aive pamusoro pako pamusaka peganda rake. Masimba aVaMarange aingova pamusoro pemapurisa matema oga. Varungu vaizvionera. Ndichochokwadi chemagariro edu muRodhizha.